Ukucatshangelwa Kwamasu Wamaselula
NgoMsombuluko, Juni 4, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 U-Adam Encane
Uhlela ukwamukela ukuzibandakanya kweselula ngendlela enkulu? Kunokucatshangelwa okuningi izinkampani ezingalindeli noma okusebenzela ukukhulisa amasu wazo weselula. Qiniseka ukuthi unaka izeluleko ezilandelayo:
Ubuchwepheshe Obungenamthungo - Ngenkathi ubuchwepheshe bokuzibandakanya kwamaselula bungakafiki ngokuphelele, izinkampani kufanele base izakhiwo zabo ezungeze ipulatifomu esuselwa emafini okuletha ndawonye okuqukethwe, amarekhodi, izifunzo zenhlalo, idatha yedivayisi, izinsiza ze-SaaS, analytics futhi nokuningi.
Shayela Kuyisenzo - Lokhu kunjalo ngisho nakwezinhlobo zendabuko zokuzibandakanya ezigxile ekusabalaliseni ulwazi noma ukuqwashisa, kepha ikakhulukazi ekuzibandakanyeni kweselula lapho imantra yempumelelo inikezela ngomuzwa wensizakalo egxile emsebenzini. Ukuguqula ukuhlakanipha kwakho okujwayelekile kubhekiswe phansi futhi kudizayinelwe izinkinobho zesenzo kunamafomu, ukubeka ukusebenza nokuphendula kwamakhasimende ngokulingana nge-interface nomkhiqizo.
Ama-Analytics - Ukuklama iselula kungathatha umzamo omkhulu kangako analytics imvamisa kuba ukucabanga kwangemuva. Kodwa-ke, ngobunzima bezicelo zeselula nokuhlanganiswa analytics ngama-kits wabo wonjiniyela wesoftware (ama-SDKs) NOMA ukuhlanganisa okuvamile analytics kuzikrini ezi-animated namakhasi ashukumisayo wokuthwebula imicimbi, uzodinga ukushiya isikhathi kukhalenda lakho lokuthuthuka ukuze izinto zilunge.
Social Media - Kusuka ekwazini ukungena ngemvume ngeselula, ukuthunyelwa kohlelo lokusebenza, ukwabelana nabantu, ezenhlalo kuyisici ESIKHULU ekusetshenzisweni kweselula. Impumelelo enkulu yamasu wokuzibandakanya eselula incike ekwakhiweni kwezinsizakalo zebhizinisi ukunqamula impilo noma umsebenzi wekhasimende wansuku zonke noma umsebenzi.
Local - I-SOMOLO ayisiyo imbiza nje, Social Ucingo Local ichaza izinhlelo zokusebenza ezikhula ngokushesha kakhulu nezigaba zokuzibandakanya embonini yeselula. Noma umkhiqizo noma insizakalo yakho ingeyona eyasendaweni, ngandlela thile ukuhlanganisa i-geography isu lakho leselula kungashayela umsebenzi omningi.
Ukuthumela imiyalezo (SMS) usaphila futhi uyaphila. Ungakubukeli phansi ukufinyelela kwayo noma imiphumela engatholwa ngemikhankaso ethile elula kakhulu.
imeyili - Yahoo! ibika ukuthi zingu-20% zonke izivakashi manje ezivakashele kumakhalekhukhwini… futhi siyakwazi lokho ama-imeyili avulekile eselula kusondela kabili lokho. Uma ungekho ukuklama i-imeyili yakho yesikrini esincane, okungenani abantu abafundi… futhi okubi kakhulu… kungenzeka ukuthi bazikhiphe ohlwini.
Mobile Apps - ungakhohlwa ukuthi zithandwa kanjani ezinye izinhlelo zokusebenza zeselula, njenge-Facebook, i-Youtube, izinhlelo zokusebenza zezithombe, ukwabelana ngomculo, i-Geolocation, njll. Ukuhlanganisa izinhlelo zokusebenza zesithathu kuhlelo lwakho lokusebenza kungakutholela amazinga wokutholwa okusheshayo uma kwenziwa kahle!
Izikrini Ezincane ziyakhula… futhi zikhombisa izinqumo eziphakeme. Ukuklama izinhlelo zokusebenza eziphendulayo ezisizakala ngosayizi wesikrini nokulungiswa kuzokhulisa ukusetshenziswa nokuzibandakanya.
Security - Abaduni bahlala befuna ukuhlasela amafoni ahlakaniphile, futhi isigebengu sisebenzisa ubungozi ohlelweni lokusebenza lwenkampani yakho ukufaka i-malware ku-smart phone into yokugcina oyidingayo.
Lezi zindlela zingadinga okusha Umphathi Omkhulu Wokuhamba obandakanyeka ekusebenzeni okuyisisekelo kwebhizinisi futhi uhlala enekhono lokuchofoza amasu okubandakanya omakhalekhukhwini kunokuba abe yi "Chief Technology Officer" ophethe umnyango wezobuchwepheshe obukhethekile.
Tags: analytics mobileukwakhiwa kweselulaukumaketha amaselulaezokuxhum mobileisu leselula
Ukuqapha okungabizi futhi okuqinile kwe-SEO
UJun 7, 2012 ngo-11: 12 AM
Kuthiwani ngokubaluleke kunakho konke: okuqukethwe?!
Jun 7, 2012 ku-7: 53 PM
Lokhu bekuyizinto abantu abavame ukungazinaki, Michael. Angikaze ngiphikise ukuthi okuqukethwe # 1.
UJun 8, 2012 ngo-4: 23 AM
Siyabonga ngempendulo yakho uDouglas. Ukucatshangelwa kwamasu okukhulumayo kubalulekile. Kepha ngokwami ​​ukubona abantu abakunaki okuqukethwe kakhulu: - / Bavame ukugxila kakhulu kumasu, kumathuluzi, kuziteshi, njll. Okuqukethwe kubalulekile. Kepha okuqukethwe okuhle kuyikho konke. Siyabonga futhi okuhle, Michiel